အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်၏ စုရင်ခွင် ကျောင်းဆောင်ဖွင့်ပွဲနှင့် အလှူဒါန သတင်းများ... ~ ဒီမိုဝေယံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်၏ စုရင်ခွင် ကျောင်းဆောင်ဖွင့်ပွဲနှင့် အလှူဒါန သတင်းများ...
စုရင်ခွင် ပညာဒါနကျောင်း၊ မရမ်းကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ နယ်
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် NLD လူငယ်များမှ ဦးဆောင်ပြီး (၂၀၁၁) ဇူလိုင်လမှ စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခဲ့သော စုရင်ခွင် ပညာဒါန ကျောင်းလေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျောင်းလေး ဖြစ်စေရန်အတွက် မြေအလှူရှင် ဦးဝင်းဦးနှင့် ဒေါ်လင်းထိန် မိသားစုမှ မြေလှူဒါန်းပြီး မရမ်းကျေးရွာ ပြည်သူများမှ စေတနာ ထက်သန်စွာ ပါဝင်လှူဒါန်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည့် စုရင်ခွင် ပညာဒါန ကျောင်းဆောင်သစ် ဖွင့်ပွဲကို (၂၉. ၄. ၁၂)နေ့က အဆိုပါ ကျောင်းလေးမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့ချုပ်မှ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်နှင့် ပညာရေးကွန်ရက်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ လူငယ်များအဖွဲ့၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် စနေလူငယ်များအဖွဲ့၊ မရမ်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စုံညီစွာ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါသည်။
စုရင်ခွင် ပညာဒါနကျောင်းလေးတွင် (၂၀၁၂- ၁၃) ပညာသင်နှစ်အတွက် သူငယ်တန်းမှ န၀မတန်းထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ(၁၀၀) ကိုလက်ခံပြီး စေတနာဆရာ (၆) ဦးကသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းလေးမှာ ဓနိမိုး၊ ၀ါးကျောင်းလေး ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့နှင့် ဆရာများ၏ ထက်သန်သော စေတနာကို တွေ့မြင် ခံစားမိခဲ့သောကြောင့် ကလေးများအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးပြုနိုင်သော ပညာဒါနကျောင်းလေး တစ်ကျောင်း မကြာခင် ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဟု ယုံကြည် ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
ရေကြောင်းသိပ္ပံ ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (CE- 24) ၏ မြတ်သောဒါန။
ရေကြောင်းသိပ္ပံမှ ကျောင်းပြီး၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြပြီဖြစ်သော (CE- 24) မှ ကျောင်းသားဟောင်း များစုပေါင်း၍ အလှူငွေထည့်ဝင်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ပညာရေး နိမ့်ကျနေသော ကလေးများအား ကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ် အမေ့အရိပ် ပညာဒါနကျောင်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်သို့ (၂၉.၄.၁၂) က အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက် လှူဒါန်းသွားပါသည်။
(၁)ကလေးများ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံရရှိစေရန် ဘုရားဆင်းတုတော်တစ်ဆူ။
(၂)ကလေးများ အလင်းရောင်လုံလောက်စွာဖြစ် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် (၄)ပေ မီးချောင်း (၁၀) ချောင်း။
(၃)ကလေးများ အေးမြသန့် ရှင်းသောရေကို သောက်သုံး နိုင်ရန် ရေအေးစက် (၁) လုံး။
(၄) ကျောင်းရန်ပုံငွေအဖြစ် အလှူငွေ (၈၂၅၀၀၀) ရှစ်သိန်းနှစ်သောင်း ငါးထောင်ကျပ်တိတိ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၊ ပညာရေးကွန်ရက်မှလည်း (USA)မှ ကိုတင်ထက်ကိုကိုနှင့် မောင်နှမများ လှူဒါန်းသည့် Computer တစ်စုံကို သွားရောက်လှူဒါန်း ခဲ့ကြပါသည်။
ဤ မြတ်သောဒါနကို အာလုံးသာဓုခေါ် နိုင်ကြပါစေ။